Kungani iziphepho zenzeka eSpain? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isiphepho samanzi eValencia, ngeSonto ngoNovemba 27, 2016. Isithombe - I-Newsstand
Iziphepho yizinto ezijwayelekile kakhulu e-United States, kangangoba minyaka yonke singabona ezinye izindaba ezihlobene nabo kwabezindaba. Kepha hhayi eNyakatho Melika kuphela abangakha, nasemhlabeni wonke.
Futhi, iSpain ifakiwe. Ubufakazi balokhu yisiphepho samanzi esimangalisayo noma i-waterpout eyakha ugu lwaseValencian ngoNovemba 27. Kepha, Kungani sineziphepho ezweni lethu?
Ukuphendula lowo mbuzo, ake sazi ukuthi iziphepho zaseMelika zakha kanjani: E-United States, Kulokho okwaziwa ngokuthi yi-"tornado alley" noma i-Tornado Alley, kunezimo ezifanelekile zokuthi kwenzeke uhlelo lokucindezela okuphansi oluzohlangabezana nomoya ofudumele ovela eGulf of Mexico.
Ukuze kube nesiphepho, umkhathi kumele ube nomoya obandayo nezinhlaka ohlangothini olulodwa, nomoya ofudumele kanye nokusalungiswa kolunye uhlangothi, okuyinto eyaziwa ngokuthi i-shear. Uquqaba lomoya luqala ukuzungeza futhi, uma kuthi ngesikhathi esithile kukhuphuke umoya oshisayo, kuzokwakha isiphepho esizodliswa ngokukhuphuka kwalowo moya oswakeme.
ESpain isimo esinaso maqondana nokwindla sifana kakhulu nalesi abanaso emathafeni amakhulu entwasahlobo. Izinga lokushisa loLwandle iMedithera aliqali ukubanda ngempela -kucishe kube ngu-18ºC- kuze kucishe kuqale ubusika, futhi lokho kwengeza ekutheni imimoya ebandayo evela enyakatho iqala ukusifinyelela, okungenzeka kube neziphepho ezakha ugu lwethu mude.
Kepha kunjalo, kuyaqabukela zithinte phansi ngakho-ke azivamisile ukudala umonakalo omkhulu, ngaphandle kwezikhukhula ngenxa yezimvula ezinkulu. Yize lesi simo singashintsha: ulwandle lwaseMedithera luya ngokufudumala, ngakho-ke ikhiqiza umhwamuko owengeziwe wamanzi; Ngaphandle kwalokho, amazinga okushisa eNorth Pole nawo ayenyuka Njengoba besikutshela kubhulogi, ukuze izimo zalezi zimo ezizakhekayo zivame kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Kungani iziphepho zenzeka eSpain?
Ukushisa komhlaba kuzodala ezinye izivunguvungu e-United States